Mihantona ve ny zanak'akanjoko | Noti saka
Rehefa saka ny olon-dehibe saka, ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika dia ny manahy, satria tsy mahazatra an'ireo biby ireo ny mihanahana. Fa raha zanak'akanjo ilay manao azy dia mety ho matotra kokoa ny raharaha raha azo atao, satria mety hampidi-doza ny ainy.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia mila mahafantatra isika maninona ny saka-ko mihanahana ary inona no hatao mba tsy hiharatsy ny raharaha.
Misy antony ara-batana sasany mahatonga ny saka mety hisoroka miaraka amin'ny vavany misokatra. Ilaina ny fandraisanao azy io hahalalanao raha toa ka antony tsy maintsy manatona dokotera ianao na raha tsy ilaina izany.
1 Maripana ambony
2 Olana amin'ny fo na miaina
4 Fandinihan'i Flehmen
5 Reraka be izy
6 Mahatsapa fihenjanana be
7 Pathologies izay hampiala ny saka anao amin'ny vavany
8 Manana zavatra ao am-bava
9 tsy fahampian-dra
Kittens afaka mihomehy noho ny antony maro. Ny mahazatra indrindra dia ny maripana ambony. Raha manana zaridaina isika ary eo antenatenan'ny fahavaratra miaraka amin'ny 35ºC na mihoatra, raha hitantsika fa mihomehy izy ireo amin'ny voalohany dia tsy hatahotra isika, satria izany no fomba tsy maintsy fehezan'izy ireo mifehy ny hafanan'ny vatany. Raha izao, raha mihanahana ao anaty trano izy ireo ary 39ºC na mihoatra ny mari-pana dia tokony horaisinay any amin'ny mpitsabo izy ireo satria manavy izy ireo.
Olana amin'ny fo na miaina
Antony iray hafa dia manana aretim-po amin'ny aretim-po izy ireo. Na dia tsy fahita amin'ny zanany aza izy ireo dia tsara ny manao fizahana raha miahiahy isika fa manana aretim-po izy ireo, indrindra raha avy eny an-dalana izy ireo, satria mety ho voan'ny aretin'andoha (filariasis), ateraky ny katsentsitra.
Mety hahita azy mihomehy foana na matetika ianao, ary ilaina foana ny mahita mpitsabo veterinera hahazoana antoka fa tsy fo mampiahiahy na toe-piainana io. Tsy azontsika lavina ny aretin'ny taovam-pisefoana, toy ny asma. Ny vatan'ny saka dia tsy maintsy manao ezaka bebe kokoa mba hahafahana mifoka ny habetsan'ny oksizenina ilainy, noho izany, tokony hanontany mpitsabo haingana araka izay tratra ianao.
Na saka mandehandeha mivoaka na tsia, dia antony iray hafa anesorana no manapoizina. Ao an-trano sy any ivelany dia misy vokatra maro izay poizina ho azy. Vantany vao natelina azy ireo ianao, ankoatry ny pantasy dia ho sahirana ianao amin'ny fisefoana, fandondonana tafahoatra, fahasarotana hijoroana, maloiloy ary / na fanintona. Amin'ireny tranga ireny, ny biby dia tokony hoentina haingana any amin'ny mpitsabo biby.
Mety efa nahita ny saka nisokatra ny vavanao ... nefa tsy panta. izany matetika izany no mitranga rehefa namofona zavatra tianao ianao na nahasarika ny sainao fotsiny. Io no antsoina hoe refle Flehmen.
Izy io dia reflexa izay miseho amin'ny saka noho ny taova vavonyasal anao Taova Jacobson. Ity taova ity dia eo anelanelan'ny lanilan'ny vavoron'ny felines.
Izy io dia reflex izay maimbo avy amin'ny vavany ny saka ary mampiasa ny lelany hitondrany azy mankany amin'ity taova tena manokana ity. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mamakafaka lalina ny fofona, na dia ny hamakafakaina ny pheromones amin'ny urine ny saka hafa aza no tanjonao ka hahafantarana raha lahy na vavy, raha totohondry ao anaty hafanana, na efa manana faritany.
Na dia ao an-tranonao aza ianao dia afaka mahita ny saka manao an'io rehefa avy maimbo lamba firakotra na ba kiraro, ohatra. Amin'ity tranga ity dia tsy ilaina ny mitondra azy any amin'ny vet.
Reraka be izy
Ny alika dia mihomehy satria reraka fa ny saka kosa tsy manao izany, satria miaina amin'ny orony foana izy ireo. Noho izany antony izany dia tsy fahita firy amin'ny saka ny filaharambe ary ara-dalàna ny fanahian'ny tompon-trano raha mahita ny pantany mihetsiketsika izy ireo.
Na dia saka aza, rehefa reraka satria, ohatra, dia nanao fanatanjahan-tena betsaka tao anatin'ny fotoana fohy na rehefa tena nafana dia afaka mihanahana indraindray ary mivoha vava. Rehefa miala sasatra izy dia hiverina amin'ny ara-dalàna ary hanidy ny vavany ary hijanona tsy hitelina.. Amin'ity tranga ity dia tsy mila mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby koa ianao.
Mahatsapa fihenjanana be
Ny saka dia mety hahatsapa ho very saina ihany amin'ny fotoana sasany, ohatra, rehefa ao anaty mpitatitra izy ireo amin'ny lalana mankany amin'ny vet. Ity adin-tsaina mahatsiravina ity dia mety hahatonga ny saka tsy hiteny. Raha vantany vao tapitra ny adin-tsaina ary mahatsapa ho tsara ny saka anao dia hitsahatra tsy hitomany izy ka tsy zavatra atahoranao izany.
Pathologies izay hampiala ny saka anao amin'ny vavany
Ireo teboka izay vao hitantsika dia tsy mampatahotra satria gazy ara-potoana izy ireo ary mandalo irery izy ireo rehefa miverina amin'ny toetra tony tsara ny saka. Saingy, etsy ankilany, misy pathologies sasany izay afaka mampisento ny saka misokatra ny vavany ary izany ho fanampin'izany, ilaina ny fitsidihana mpitsabo biby.
Manana zavatra ao am-bava
Ohatra, mety manana olana am-bava, ao amin'ny valanoranony, rehefa misy zavatra hafahafa miraikitra ao na raha misy bibikely manaikitra azy amin'ny vava. Rehefa mitranga izany dia ho hitanao ny sakafon'ny saka saka, misoka-bava foana izy, misintona na midoboka. Mety manana fofona ratsy ianao.
Raha misintona ny saka anao / na manana vava misokatra, dia mety tsy miteraka anemia. Ny saka dia manana selan'ny rà mena (tompon'andraikitra amin'ny fitaterana oksizenina ao anaty ra) ary tsy maintsy miaina haingana kokoa ary manintona mba hahatratrarana izany. Raha izany dia, zava-dehibe ny manatona mpitsabo biby mba hahafantatra ny fomba hanampiana azy.
Raha mihoatra ny 8 taona ny saka anao ary voamarikao fa mihanahana izy, zava-dehibe ny mandeha any amin'ny mpitsabo ny biby mba hialana amin'ny hyperthyroidism. Raha mijaly amin'ity aretina ity ianao dia ho tsikaritrao ihany koa fa mihena ny lanjanao nefa tsy very ny fahazotoan-komana, fa mihinana bebe kokoa ianao nefa mampihena.
Mety ho tsapanao fa misy antony maro mety mahatonga ny saka anao hanakory sy / na hisoka-bava. Ny antony sasany dia ny antony hankanesana any amin'ny vet fa ny hafa kosa tsy. Indraindray dia zavatra voajanahary izany ary amin'ny hafa dia ilaina ho an'ny matihanina amin'ny fiompiana biby ny manombana ny fahasalamany mba hialana amin'ny olana rehetra ary ambonin'izany rehetra izany. mba hahitanao ny fitsaboana sahaza azy amin'ny tranga manokana.
Araka ny hitantsika dia misy antony maro mahatonga ny saka mandehandeha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Fa maninona ny saka no mitsaingoka
tsy dia hoy izy:
misosika sy misento ny saka misy olona afaka milaza amiko izay tsy mety atahorako
Mamaly an'i caren
Mety nihinana zavatra misy poizina ianao. Tokony hoentinao any amin'ny mpitsabo biby izy mba hijerena sy hitsaboana azy.
hazavana garian'i Maria dia hoy izy:
Salama, Marina ny anarako, manana saka navotana teny amin'ny arabe aho, nitondra azy tany an-tranoko aho tamin'ny volana desambra ary androany volana febroary isika, efa vita vaksiny, voaravaka ary nodidiana, 7 volana eo ho eo izy, andro vitsivitsy, nitsoaka izy, nihosin-drà, nikotrokotroka, mandry, mijanona ao anaty fanjakana catatonika miaraka amina mpianatra mihalehibe, eo am-panaovana ny tongotr'ireo fanaka nifandona tamin'ny rindrina ary tsy nitaraina, avy eo reraka izy, nijery lavitra sy nifanarahana. manomboka mitaraina amin'ny feo maranitra be izy, avy eo lasa henjana be ny fofonainy ary afaka 5 minitra dia mandalo ny zava-drehetra, maharitra 10 minitra izany.
Manontany tena aho fa mety ho voan'ny epileptika ny saka ahy na zavatra mitovy amin'izany.
Valio i luz marian giraldo
Salama Luz Marian.
Tsy afaka milaza aminao aho, tsy veterinera aho. Fa azo antoka fa tsy "normal" ny mahazo azy.
Manoro hevitra ahy aho ny hitondra azy any amin'ny mpitsabo biby, raha sanatria.
Inona no vokatry ny fahalavoan'ny saka?